Jabhaddi la odhan jiray ONLF (SCF)Oo Heshiis Cusub La Gelaysa Ra’isal Wasaaraha Ethiopia Abey Axmed. – Xeernews24
Jabhaddi la odhan jiray ONLF (SCF)Oo Heshiis Cusub La Gelaysa Ra’isal Wasaaraha Ethiopia Abey Axmed.
18. September 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
sheegtay inay Rayalwasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed ka dalban doonto xaq aayo ka tashi oo ah in gobalku noqdo mid ka madaxbanaan ItoobiyaWakaaladda wararka ee Bloomberg ayaa warbixin ay shalay baahisay waxay ku sheegtay in jabhadaasi hadda doonayso in gobalka Soomaalida Itoobiya laga qabto afti dadweyne oo ah inay shacabku kala doortaan inay noqdaan dal madaxbanaan iyo inay ka sii mid ahaadaan Itoobiya, waxaanay warbixintu soo bandhigtay aragtida uu arrintan ka qabo Madaxweynaha cusub ee deegaankaas Mustafe Muxumed Cumar. Warbixinta oo uu wargeyska Geeska Afrika soo turjumay waxay u dhignayd sidan “Jabhad bariga Itoobiya ka jirta ayaa sheegtay inay dalban doonto in gobolka gaasta hodonka ku ah ee dhibtu ka jirto laga qabto afti aayo ka talin ah marka ay la galaan wada hadalka taariikhiga ah dawladda raysal wasaare Abiy Axmed.
Qorshaha jabhadda ONLF oo ka waday bariga Itoobiya muddo soddon sanadood ka badan iska caabin heerkeedu hooseeyo wuxuu ku soo beegmay xilli raysal wasaare Abiy uu ku casumay mucaaradka mar mamnuuca ahaa inay ka qayb qaataan doorashooyinka. Dalabkoodu wuxuu sii cuslayn karaa tartanka loogu jiro khayraadka gobolka oo ay ka mid tahay gaasta dabiciiga ah oo dawladdu ku qiyaastay inuu ugu danbaynta soo xarayn doono sanadkii lacag dhan 7 bilyan oo doolar.
Waxa miiska saaran gaas dabiiciga ah oo ku jirta gacanka Ogaden taas oo lagu qiyaasay inay tahay 8 tiriliyan (cubic feet). Dhoofinteeda waxa la filayaa inay bilaabanto 2021 iyada oo sii maraysa dhuumo ku xidhan dalka deriska ah ee Jibuuti. Qayb ka tirsan shirkadda Shiinaha ah ee magaceedu yahay China Poly Group Corp. ayaa bilawday inay tijaabiso dhoofinta kayd shidaal.
“Waxaanu doonaynaa aayo ka talinta ay aqoonsan yihiin xeerka caalamiga ah iyo dastuurka Itoobiya,” Axmed Yaasiin Cabdi oo ah xoghaya arimaha debedda ee ONLF ayaa sidaa yidhi isaga oo jooga dalka Kenya, waxaanu raaciyay. “waxaanu doonaynaa in dadkayagu helo xaqa inay iyagu go’aanka gaadhaan,” ayuu ku daray. Wuxuu sheegay inaan kooxdoodu wax shuruud ah ku xidhayn wada hadalka. Madaxwaynaha cusub ee gobolka ayaa isna u muujiyay taageero inay helaan is-xukun wayn.
Itoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika, oo ku xigta Nayjeeriya, waxaay ka kooban tahay federaal loo qaabeeyey inuu siiyo is-xukun daraasinta qoomiyadaha ah ee degan. ONLF waxaay muddo dheer ku taagnayd in gobolka Soomaalida, oo ay iyadu u taqaan Ogaden lana deris ah dalka colaadu ragaadiyeen ee Somaliya, inaan si haboon loogu metelen dawladda dhexe ee federaalka ah.
Dastuurka Itoobiya wuxuu bixinayaa xaqa dadka “badan” ee leh dhaqan guud, caado luuqad, tilmaan iyo “isku xidhaansho” guud oo degan “dhul la garan karo ay ku badan yihiin oo is raacsan” inay dalban karaan aayo ka talin iyo inay xitaa abuuri karaan dal u gaar ah.
Hadafka mudada fog ee ONLF wuxu ahaa xaq aayo kal talinta, marka haddii ay “joojiyaan inay u dagaalamaan xaqaas, looma arki doono inay yihiin kuwo shacabka metela,” waxa sidaas tidhi Juweeriya Cali oo ah ardayad shaahadada sare ee PhD ka diyaarisa jaamacadda ku taal Ingiriiska ee Westminster. Waxaay ku dartay “laga yaabee inay ONLF inay marka ay dhowaan tegayso miiska wada hadalka ay doonto nooc damaanad ka baxsan dasturka oo ay u hesho aayo ka talinta.”
ONLF oo hubka qaadatay 1984 waxaay khatar teel teel ah ku ahayd maamulka gobolka. Waxaay ku dhawaaqday July kadib kulankii madaxdeedu ku yeesheen Eretriya, xabad joojin inta uu socdo waxa Axmed ugu yeedhay “heshiis siyaasadeed sal balaadhan.”
Weerarkeedii ugu waynaa waxaay qaaday April 2007 markaas oo ay weerartay goob ku taal goboblka Soomaalida oo ay hawl ka waday shirkadda Shiinaha ee magaceeda la yidhaahdo Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau – halkaas oo ay ku dishay sagaal ka mid ah shaqaalaha Shiinaha iyo 65 Itoobiyaan ah. Axmed wuxuu sheegay in weerarkaas cudur daar leeyahay maadama oo dawladii jirtay ay doontay inay gaas soo saarto iyada “oo aan ogolaansho ka haysan dadka.”
Inkasta oo aanu sheegin tirada ciidanka hubaysan ee ONLF, hadana waxa la aamisan yahay in tiradoodu si wayn hoos ugu dhacday toban sanadood ka hor.
Ciidan booliis oo gaar ah oo ka jira gobolka Soomaalida ayaa caan ku noqday farsamooyinka uu kala hortago iska caabinta. Waxa lagu eedeeyey inuu xidhay oo jidh-dil u gaystay dadka lagu tuhunsan yahay inay naxariis u hayaan ONLF. Tan iyo markii madaxwaynihii hore ee gobolka ee fadhigiisu ahaa Jigjiga ay meesha ka tureen ciidamada federaalku bishii Ogost, masuliyiinta iyo kooxdani iskumay dhicin, sida ay xaqiijiyeen Axmed iyo madaxaynaha cusub ee goblka Mustafe Cumar.
“Waxa jira meelo badan oo aanu isku feker ka nahay,” Mustafe madaxweynaha gobalka Soomaalida ayaa sidaa yidhi isaga oo jooga Adis Ababa, waxaanu raaciyay “Haa waxaanu rabnaa is-xukun intan ka badan oo gobolku helo, is-xukun run ah.”
Inkasta oo xabad joojinta oo qayb ka ahayd is-bedelka xoogga leh ee ka socda Itoobiya, ay ka horaysa Mustafe, hadana ONLF waxaay taageersan tahay madaxwaynaha cusub sababta oo ah “wuxuu samayn karaa isaga oo hagaajin kara nidaamka abuuri karana nidaam siyaasadeed cusub,” ayuu yidhi Axmed. “waxaanu isku raacnay inaanu wada shaqayno si aanu ugu raadino xaq badan dadka Soomaalid ah.”
Cabdiwaasac Cabdilaahi Bade oo borofosoor ka ah jaamacadda Addis Ababa ayaa sheegay inaanu ka arag “kooxda hiigsi iyo ujeedo cad.” “Ka hor intaaynaan ka hadal aayo ka talin, waa inaynu ogaanaa cidda ah ONLF iyo cidday metesho ONLF,” ayuu yidhi Cabdiwaasac.
Mustafe wuxuu sheegay in maamulka gobolku u ogolaanayo ONLF inay abaabusho taageerayaal uuna gacan ka gaysan doono wada hadalka rasmiga ah ee ay la geli doonto dawladda Abiy toddobaadyada soo socda. Madaxwaynuhu wuu soo dhoweeyey suurtagalnimada in ONLF ka qayb qaadato doorashooyinka federaalka ee loo qorsheeyey 2020.
Axmed wuxuu sheegay in ONLF ay ka wada hadli doonto dawladda suurto galnimada inay hubka dhigto, islamarkaana haddii wada hadalku adkaado, madaxwaynaha Somaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed ayaa balan qaaday inuu gacan ka gaysan doono mar uu ka qayb galay wada hadal ka dhacay Asmara, caasimadda Eretriya, 5 September. Marka heshiiska la dhamaystiro, ONLF way u tartami doontaa doorashada, ayuu yidhi.
“Waxa loo bahan yahay in la wada hadlo — heshiis siyasadeed sal balaadhan la gaadho, Ogaden helo nabad, kadib ayaa shirkadaha shidaalku ay iman karaan oo baadhitaan samayn karan,” ayuu yidhi Axmed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/ogaden.jpg 166 303 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-18 20:58:462018-09-18 20:59:22Jabhaddi la odhan jiray ONLF (SCF)Oo Heshiis Cusub La Gelaysa Ra’isal Wasaaraha Ethiopia Abey Axmed.
Daawo kacdoon istaadhmay iyo Qoomiyadihii Aan Oromada ahayn oo Is Bahaystay... Shirkii Lagu Heshiisiinayay Soomaalida iyo Oromada Itoobiya oo Ka Dhacay Magaalada...